Geo-bombing: YouTube + Google Earth · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2019 4:40 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, Français, Español, Português, বাংলা, English
Ny Geo-bombing dia iray amin'ny teknika izay mety ampiasaina ahafahana mampahomby ny fampielezana ireo fanentanana an-dahatsary YouTube amin'ny alalan'ny fampidirana an-tsaritany ireo fampiasan'ny Google tahaka ny Google Maps sy ny Google Earth. Amin’izao fotoana izao ianao afa-mijery ny lahatsarinao voafangitra sy mifarango (geotagged) ao amin'ny Google Earth sy ny Google Maps. Hiseho avokoa izay rehetra lahatsary YouTube voafangitra rehefa misy ny manapika hisokatra ny Google Earth/Maps amin'ny Youtube
Eto ianao mahita izay ilainao ho fantatra mba hahazoana tsara ity teknika matanjaka ity.
1- Mamangitra ny lahatsarinao:
Mandritra ny fotoana amoahana lahatsary amin'ny YouTube ianao afa-mamangitra ny lahatsarinao amin'ny toerana iray:
Rehefa voarakitra ny toerana ary tafavoaka ny lahatsary dia hipoitra eo amin'ny Google Earth izany.
2- Ahoana ny amoahana lahatsary Youtube voagangitra ao amin'ny Google Earth?
Ho famelomana ny velatra (layer) Google YouTube, dia mila misosa mankany amin'ny tolotra “Layers” eo amin'ny ilany ankavia amin'ny Google Earth ianao. Sokafana (tendrena) ny vona “Gallery” eo amin'ny layers (velatra) hivoahan'ny velatra “Youtube”. Rehefa notendrenao ny efajoro eo anilan'ny Youtube Layer dia hivoaka manerana ny glaoby ny ikônina Google YouTube rehetra.
Fampiasana mahomby ny teknikan'ny Geo-bombing
Nampiasain'ireo Toniziana mpikatroka avy ao amin'ny bilaogy ifarimbonana Nawaat.org (The Core) ity teknika ity handrohizana ireo lahatsary fijoroana vavolombelona am-polony nahitana ireo Toniziana gadra politika sy mpiaro ny zon'olombelona ho eo amin'ny toerana misy ny lapan'ny filoham-pirenena ao amin'ny Google Earth. Amin'izao fotoana izao ianao raha misidina ambonin'ny lapan'ny filoha eo amin'ny Google Earth, dia ho hitanao indrindra ireo lahatsary miresaka ny fahafahana ara-tsivily ireo izay iezahan'i Ben Ali tsy ho hitan'ny Toniziana mpiserasera amin'ny alalan'ny fanakanana ireo tranonkalam-pifampizarana lahatsary ireo, dia ny Youtube sy ny DailyMotion.
Jereo ny Sit-in virtoaly eo amin'ny Lapam-panjakana iasan'ny Filoha Toniziana ao amin'ny Google Earth: Azonao atao ny mitroka ity dosie kmz Google Earth (Keyhole Markup Zip) izay hampiainga ny Google Earth (mila fisian'izany amin'ny finday na solosaina ampiasainao ianao aloha) ary misidina mankany amin'ny Lapam-panjakan'ny Filoha ao Carthage.
Sit-in virtoaly ao amin'ny Lapam-panjakana Toniziana
Nikarakara “sit-in nomerika” ireo Toniziana mpikatroka sy ny mpiara-dia aminy, mandrohy lahatsary am-polony miresaka fahafahana ara-tsivily eo amin'ny lapam-panjakan'ny filoha ao amin'ny Google Earth. Namadika ny tantaran'ny zon'olombelona tsy dia zava-dehibe loatra ho fanentanana manerantany azo alain-tahaka izany.
Mahatalanjona tokoa ny fanapoahana nataon'ilay Google Earth kely, raha heverina ny fisandratan'ilay fampiasa (…) Fotoana hamaritana ny “Google geobombing” na ny “Google Earth bombing”, avy eo (…) Na dia mbola maina be aza ny famaritana, dia tsy isalasalana fa mora ampiasaina amin'ny fifandraisana amim-bahoaka (amin'ny ady any anaty akata) izany .
Tsy vitan'ny hoe manitsy sy maneso ny fandraràn'ny fitondrana ny habaka fifampizarana lahatsary izany fanentanana antserasera izany, fa mahatratra ihany koa ireo vahiny mety tsy mahafantatra ny fihoaram-pahefana ao Tonizia. Sambany ireo mpizahatany virtoaly an'i Tonizia no mahita ny ilany matroka amin'ny toerana manatantara sy ireo torapasika mahafinaritra.